ပလတ်စတစ် လျှော့ချရေး မူဝါဒ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ပလတ်စတစ် လျှော့ချရေး မူဝါဒ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
Myanmar people walk pastagarbage dump filled with plastic bags on the outskirts of Yangon on April 27, 2011. Authorities in Yangon have banned plastic bags, state media said on April 27, in an attempt to stop non-degradable waste polluting Myanmar's main city. AFP PHOTO/Soe Than WIN / AFP PHOTO / Soe Than WIN
ပလတ်စတစ် လျှော့ချရေး မူဝါဒ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကို သီးသန့်ဖယ်ရှားစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုနှုန်းထားများ လျှော့ချခြင်းတို့ကို မူဝါဒတစ်ရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စတင် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်က ပြည်ထောင်အစိုးရသို့ တိုက်တွန်း ကြောင်း အဆိုကို လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
မောက်မယ်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးစိုင်းငေါင်းဆိုင်ဟိန်းက အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ရာမှာ နေ့စဉ်စွန့်ပစ်တဲ့ အမှိုက်များမှာ ပလတ်စတစ်တစ်ဝက်ခန့်ပါဝင်နေပြီး အတူတကွရောနှောစွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် လေဟာ ပြင်များ၊ လူနေအိမ်ခြေများ၊ မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင်လမ်းမကြီးများ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ မြစ်ဆိပ် ချောင်းဆိပ်မ များ၊ တော၊ မြို့များပါမကျန် အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ အမှိုက်ပုံများဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့ ထည့် သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုကို ရပ်စောက်မဲဆန္ဒနယ်က ဦးခင်မောင်မြင့်က ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပလတျစတဈ လြှော့ခရြေး မူဝါဒ ရေးဆှဲပွဋ်ဌာနျးဖို့ လှတျတျောမှာ ဆှေးနှေး
ပလတျစတဈပစ်စညျးမြားကို သီးသနျ့ဖယျရှားစှနျ့ပဈစခွေငျး၊ ပလတျစတဈအသုံးပွုမှုနှုနျးထားမြား လြှော့ခခြွငျးတို့ကို မူဝါဒတဈရပျ ရေးဆှဲပွဋ်ဌာနျးပွီး တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ စတငျ အကောငျ အထညျဖျောဆောငျရှကျပေးဖို့ လှတျတျောက ပွညျထောငျအစိုးရသို့ တိုကျတှနျး ကွောငျး အဆိုကို လှတျတျောက လကျခံဆှေးနှေးဖို့ ဆုံဖွတျလိုကျပါတယျ။
မောကျမယျမဲဆန်ဒနယျက ဦးစိုငျးငေါငျးဆိုငျဟိနျးက အဆိုကိုတငျသှငျးခဲ့ရာမှာ နစေ့ဉျစှနျ့ပဈတဲ့ အမှိုကျမြားမှာ ပလတျစတဈတဈဝကျခနျ့ပါဝငျနပွေီး အတူတကှရောနှောစှနျ့ပဈခွငျးကွောငျ့ လဟော ပွငျမြား၊ လူနအေိမျခွမြေား၊ မွို့တှငျး၊ မွို့ပွငျလမျးမကွီးမြား၊ ပငျလယျကမျးခွနေဲ့ မွဈဆိပျ ခြောငျးဆိပျမ မြား၊ တော၊ မွို့မြားပါမကနျြ အရုပျဆိုးအကညျြးတနျတဲ့ အမှိုကျပုံမြားဖွဈပျေါလာစတေယျလို့ ထညျ့ သှငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အဆိုကို ရပျစောကျမဲဆန်ဒနယျက ဦးခငျမောငျမွငျ့က ထောကျခံဆှေးနှေးခဲ့ပွီး ပွညျသူ့လှတျတျောမှာ ကနျ့ကှကျသူမရှိဘဲ အဆိုကိုလကျခံဆှေးနှေးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleရခိုင့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီ ၅ ခု မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေး
Next articleအမေရိကန် ၁၂၆ သန်း ရုရှားနိုင်ငံရေး ပို့စ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ ဖေ့စ်ဘုတ် ပြော